About Us - UMTHETHO Motor Co., Ltd.
Kuvaliwe-Loop Stepper Driver
Kuvaliwe-Loop Stepper Motor
Uxhumano Stepper Motor
Yemihlaba Gearbox Stepper Motor
Three-Isigaba Hybrid Stepper Motor
Three-Isigaba Hybrid Stepper Motor Driver
Two-Isigaba, Four-Isigaba Hybrid Stepper Motor
Two-Isigaba, Four-Isigaba Hybrid Stepper Motor Driver
Changzhou UMTHETHO Motor Co., Ltd esungulwe ngo-2010, nge izitshalo ezimbili yokukhiqiza. Yonyaka zayo zokukhiqiza ukufinyelela phezu amayunithi 2 million, siqu abasebenzi 200 futhi 50000 square imitha ishede. It has 1 ihhovisi legatsha European futhi 2 Amahhovisi zangaphandle China.is micro-motor yokukhiqiza ibhizinisi ne imodeli entsha ukuphathwa namandla eqinile lobuchwepheshe. Professional R & D kanye ukukhiqizwa hybrid stepper izinjini, DC brushless izinjini, igiya ibhokisi izinjini, Servo izinjini, ngemoto noma ngezinyawo ahlobene kagesi zokulawula.
UMTHETHO Motor izibophezele ekusizeni amakhasimende kuzo zonke izimboni ukuze kuhlangatshezwane nezidingo zomphakathi zamanje nezesikhathi esizayo, futhi anganikeza professional OEM amasevisi ukuze oyifisayo futhi ukukhiqiza nemikhiqizo high amakhasimende.
Angaphezu kuka intuthuko, emisha angenamkhawulo, ibhizinisi ifilosofi yethu,
Njengoba omunye izinkampani kunazo ezintsha emakethe, UMTHETHO Motor nkampani njalo nokugcina sisondelene amakhasimende ukuqinisekisa ngempumelelo umkhakha izixazululo. Siyaziqhenya ukuhlinzeka imikhiqizo namasevisi eziningi brand unqambothi.
Umgomo wethu ukuhlinzeka ezintsha, imvelo kanye ongaphakeme izindleko micromotor umkhiqizo izixazululo usizo amakhasimende aphumelele.
isilawuli Ntelligent kuholela esikhathini esizayo!
isilawuli zezimboni Intelligent kwenza izwe imvelo futhi esebenza kahle!
Ube uchwepheshe ukulawula ohlakaniphile uhlelo ukuhlanganiswa!
UMTHETHO MOTOR uye zanqwabelana eminyakeni engaphezu kuka-10 nakho yokukhiqiza stepper izinjini, futhi uye waba ibhizinisi zobuchwepheshe ukugxila ukukhiqizwa stepper motors kanye ahlobene kagesi zokulawula.
Sizimisele ekusizeni amakhasimende kusuka zimboni ukuhlangabezana nezidingo zomphakathi kusukela manje kuqhubeke.
inkampani ukuhweba Foreign aqine.
UMTHETHO MORTOR esungulwe bafakwa ukukhiqizwa
legatsha German elisungulwe legatsha Bremen Jinan esungulwe legatsha Hefei esungulwe
Ukwakhiwa imboni entsha igcwaliswe futhi ukukhiqizwa uqalise.
Gxila umkhakha Amathrendi, ngiphikelela emakethe ngamakhasimende ukuthuthukisa bese ucwaninga imikhiqizo emisha.
Ngokuyikho futhi eliphezulu umkhiqizo ukulethwa
Qedela ukukhiqizwa futhi ukulethwa umkhiqizo ngaphakathi ngesikhathi esinqunyiwe kwinkontileka
Ngemva yokuthengisa ukweseka
Isikhathi esijwayelekile bokusebenza
Siza amakhasimende baxazulule izinkinga ekusebenziseni okungokoqobo okokuqala
Ngemva kweminyaka engaphezu kweminyaka eyishumi umsebenzi onzima, siye wathandwa ezingaphezu kuka 3,000 amakhasimende, futhi ezingaphezu kuka-850 amakhasimende babe eminyakeni engaphezu kuka-5.
Ankert uye waqaphela ukuthi ukukhiqizwa Imboni 4.0, ukukhiqizwa echwepheshile, futhi inikeza kuka 10,000 izinhlobo ongakhetha umkhiqizo ukuhlangabezana nezidingo zamakhasimende kwizimboni ezehlukene.
Sine 26 ochwepheshe, 15 babo babe eminyakeni engaphezu kuka-10 isipiliyoni abasebenza. Sine 35 yokuthengisa service izisebenzi abaye kwenziwe umsebenzi othize ukwahlukana pre-ukudayiswa, ngemva-ukudayiswa, futhi emva-sales ukuthuthukisa ikhwalithi wokubambisana.
Sine 2 izimboni kanye namahhovisi 2 e-China. Ngo-2014, sasihlela khona indawo legatsha laseJalimane. I global service Warehousing kuphela ukulethwa ngokuphepha nangendlela efanele kwezimpahla.
Ucwaningo Futhi Development
Besilokhu uzibophezele ucwaningo nentuthuko kanye ngcono imikhiqizo yethu, kanye utshalomali yonyaka ucwaningo nentuthuko idlula 10 million yuan.
Changzhou UMTHETHO Motor Iyakwazi ubuchwepheshe core hybrid stepper motor, unomphela uzibuthe stepper motor, Servo motor, brushless DC motor kanye motor drive nokuhlanganiswa. Inkampani uyaqhubeka lokufeza ucwaningo lobuchwepheshe nokuthuthuka, ukuthuthukisa ukusebenza umkhiqizo, futhi njalo ukuthuthukisa imikhiqizo ezintsha ngokusho emakethe kanye nezidingo zamakhasimende.
Vala Loop Stepper Motor Driver , Nema 23 Stepper Motor Driver , Nema 17 Stepper Motor Driver , Digital Stepper Servo Driver , Stepper Motor Driver , CNC Stepper Motor Driver Kit ,